Madaxweynaha Tabashada Jaamac Shabeel qanci waayey ee ku cariig-sanaya, malaga filayaa inuu qanciyo Tabasha bulshada Somaliland?. W/Q Cali khayre Ismaaciil.
Saturday October 06, 2018 - 18:21:37 in Wararka by Super Admin
Waxay in badan oo bulshada ka mid ahi iyo xubnaha golaha dhexe ee xisbiyada gaar ahaa kuwa ku magacaaban xisbiga kulmiye, qaababka guracan ee sharci darada iyo fowdada ah ee ay istimaalayaan xisbiyada iminka jiraa, waxaa aragtaan xisbigii talada hayey ee weliba labada jeer talada qabtay ee ay ahayd in laga daydo dimoqraadiyada, iyo raacista shuruucda xisbiga u yaal iyo ka dalka u yaalba, hore waxaynu u ogayn madaxweynihii hore iyo craxman Cqaadir sidii foosha xumayd ee laga yeelay, in khasab golaha lagaga kiciyey, Maanta ayaa aragtaan Madaxweyne muuse biixi iyo Jaamac Shabeel, dadka bini aadanka ah waxuun baa xidha, dhaqan, diin, sharci ay ku heshiiyeen, amaba xidhiidh ka dhexeeya ayaa qabta, haddii intaasba la waayo xayawaanka waxba kama sokeeyaan, waxaynu ka dheregsan nahay waayaha adag ee uu la soo maray jaamac ,muuse,iyo ka craxman cqaadir la soo maray siilaayo,haddii sharciga loo raaci kari waayey, miyey suurtogeli wayday in dhaqanka aynu leenahay, damiirka wanaagsan wuxuu faraayo loo raaco, waxaa kale oo is waydiintu tahay ninka maanta jaamac oo garabkiisii midig ahaa, oo xabado badan isaga dhigay, in badan hadal xumo, dagaal muuse lagu wado qaadanayey, maanta oo uu madaxweyne yahay qancin kari waayey tabashada jaamac shabeel, ee ku sii cariigsanaya ,miyaa ka filaysaan inuu qanciyo tabashada bulshada somaliland amaba siyaasi ay aragtida ku kala duwan yihiin? Waxaa kale oo iyana meesha taala umada u dhaw ee odhan wayday madaxweyne waad khaldan tahaye jaamac waanu qabanaynaaaye adna qabsoon , xubnaha golaha dhexe sheeganaya ee maalinba nin lagu hor bahdilaaya ee aan wax ka odhanayn ee la leeyahay iyagaa baarlamaankii xisbiga ah?
Mar haddii aynu marayno inaan sharci iyo xisti midna aan la eegayn, yaa odhanaya hebel baa madaxweyne ku guulaystay iyo hebel baa laga guulaystay midna, sharcigu ma hebel magac loo ansixiyaa isagana yaanay waxba qaban?
Xisbigii kulmiye maanta wuxuu si cad u ansixiyey inay cadaalad darada somaliland ka qaylinaysaa halka laga yagleelo yahay. Waxaa kale oo cadeeyey in waxba laga qajilayne sidii la doono la yeelaayo. Allaahu mustacan, maxaa inoo yaala ee aynu sugaynaa, kuwa kalena waad wada arkayseen siday u dhaqmayeen, mar haddii kii la lahaa wax buu helay oo wuu xeebanayaa sidoo si ka daran yeelaayo alay leedahaye aan eegno waxay dhasho.